China PET Nucleating Ukwu PET-98C Manufacturer na Supplier | BGT
PITA-98C bụ Nucleating Onye Ọrụ nke Hazie silicate iji melite ogo PET.
Enwere ike iji ya na plastic plastic nke PET.
Iji dozie nsogbu nke agha nke PET na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ihe mkpofu n'oge nhazi, kpatara obere ọsọ ọsọ, ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-eji ihe ndị na-eme ka ha nwee ike ịkwalite ọsọ nke crystallization, mana ọ na-egbochi ọrụ ndị ọzọ nke PET maka obere molekul kwukwara.
Ma mgbe ị na-eji PITA-98C, a ga-eme ka arụmọrụ niile dị n'elu. Ọ bụghị naanị iji mee ka kristal ahụ dịkwuo ngwa ngwa kamakwa ọ nwere ike melite nkwesi ike, iguzogide okpomọkụ, na iwetulata ngwa ngwa na ịda mbà nke ngwaahịa ndị emechara. N'ihi ya, na ọnụego nke okokụre ngwaahịa ga-amụba ọtụtụ.
25kg / akpa
Nke gara aga: Polyester & Naịlọn Nucleator P-24
Osote: PITA onye na-ekpo ekpo BT-TW03